SARY: Mamantatra Toeram-pitsangatsanganana Ao Slovenia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2013 10:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, македонски, Nederlands, Italiano, عربي, Català, Ελληνικά, English
Anisan'ny toerana fandehanana malaza i Slovenia tao anatin'ny taona vitsivitsy izao noho ireo karazana hetsika mahaliana mandritra ny fialantsasatra ao aminy, indrindra ho an'ny olom-pirenena Eoropeana. Nahombiazana tokoa ny hevitr'i Slovenia hifantoka sy hampandroso ny fizahan-tany ara-pahasalamana, ary ankehitriny dia manana ivon-toerana ranomafana sy toeram-pahasalamana am-polony ity firenena kely ity.
Tamin'ny fampiasana ireo tombontsoa ara-jeografika sy ara-toetr'andro no nandrafetan'i Slovenia ny fananganana toerana manaraka ny fenitra ara-pahasalamana 15 maoderina indrindra miaraka amin'ny teny faneva :”Manavatsava ny Natiora Ho amin'ny fahasalamana”. Nampitombo ny isan'ny mpitsidika an'i Slovenia izay mpankafy ny morontsiraka maitson'i mediteranea izany fanentanana ara-pizahan-tany an-dranomafana (spa) izany.
Iray amin'ny voahary mahatalanjona ny olombelona ao Slovenia – Lavabato Skocjan ; nampiasaina noho ny Creative Commons license.
Mirefy 46,6Km monja ny halavan'ny morontsiraka Slovenina, saingy nahasarika mpitsidika kosa ny tananan'i Piran, Izila sy Kopar miaraka amin'izato drafitry ny tanàna tamin'ny vanim-potoana Antenantenany. Feno ny fiarahabana mahafinaritra avy amin'ny mpisera avy ao Eoropa sy izao tontolo izao nandritra ny vakansin'izy ireo tao Slovenia ny tambajotra sosialy, izay tena valalanina tokoa tamin'ny hatsaran'ny zavaboarin'ny tao an-toerana. Pejy facebook iray ho an'ireo mpankafy lavabato mifampizara ny sarin'ilay lavabato ao Skocjan. Pejy facebook iray hafa kosa natokana ho amin'ny fahavaratra ao Slovenia, nifampizara ny sary ifampizaran'ny mpiserasera amin'ny fialamboly fanao fahavaratra tahaka ny rafting.
Lesona mivoy Kayak ao amin'ny Lembalemban'i Soča; sary avy amin'ny fahatsaram-pon'ny Soča Rafting, nahazoana alalana.
Hanaovana hetsika sy fialamboly maro ny Lembalemban'i Soča Valley; sary avy amin'ny fahatsara-pon'ny Soča Rafting, nahazoana alalana.
Na izany aza anefa, dia toa ny tanànan'ny Bled no toerana malaza indrindra:
Toy izao no lazain’ilay mpianatra tantara ao amin'ny oniversite Nottingham Alastair Mavor , avy any London, mahakasika an'i Bled:
Farihin'i Bled – Kanto tsy azo resena
Hoy kosa ity mpisera Twitter hafa, matihanina amin'ny media sy miteny amin'ny fitenin'ny teratanin'i Slovenia, @LenjaFPapp:
Fomba mahasondriana hamaranana ny Alahadinao!#MassageInNature #sLOVEnia pic.twitter.com/l7vquChnkk
Namoaka sarin'ny farihin'ny Bled kanto dia kanto raha alaina sary i @StephDo_avy ao Aotrisy
Tontolo andro nahafinaritra tao teto #bled fitsidihana an'i #slovenia #blue #summer2013
Misarika ireo mpitsidika hatrany ny farihy Slovenina raha toa ka toerana sy hetsika hafa no tian'i Slovenia hisarihana ireo mpizahan-tany ary ataon'ny Vaovao ABC hoe fialan-tsasatra ao anivon'i Eoropa
Tantaran'ny Slovenia farany